Mareeykanka oo Duqeeyay Waqooyi Bari-ga Soomaaliya - Warbixinta KON | KEYDMEDIA ONLINE
Mareeykanka oo Duqeeyay Waqooyi Bari-ga Soomaaliya - Warbixinta KON
Kismaayo (KON) - Diyaradaha aan duuliyaha lahayn ee Drone-ka ee uu iska leeyahay dalka Mareekanka ayaa weeraro xaga cirka oo ay ka fuliyeen Buuraleyda Gal-Gala ee Waqooyi Bari Soomaaliya ayaa waxaa ay ku dileen xubno sar sare oo ka tirsan kooxda Shabaab Al-qaacida.
Tirada xubnahaan Shabaab ka tirsan ee lagu dilay duqeymaha xagga cirka ah ee ka dhacay Buuraleyda Gal-Gala ayaa waxaa ay dhanyihiin ilaa 13 xubnood kuwaasoo ka tirsan Kooxda Shabaab.
13 Qof ee Shabaab ka tirsan ee la dilay ayaa waxaa ku jira ragg xubno sare ka tirsan Shabaab kuwaasoo mudooyinkaanba ku suggnaa Buurleyda Galgala, inkasoo aan wali la heynin magacyada ragga weerarkaasi lagu dilay, waxaana sidoo kale duqeyntaasi lagu bur buriyay baabuur nooca dagaalka ah iyo agab Ciidan oo ay ragga la laayay iska lahaayeen ayadoona ay kala firxadeen Maleeshiyaadkii kale.
Khasaaraha Shabaab duqeyntaasi ka soo gartay ka sokow waxaa sidoo kale jira khasaare soo gaaray Diyaaradihii duqeynta geystay kuwaasoo la sheegay in labo kamid ah ay soo dhaceen kaidb hubka lidka Dayuuradaha oo ay ku direen Maleeshiyaadka Shabaabka, sidaasna waxaa warbaahinta u xaqiijiyay nin magaciisa ku sheegay Sheekha Muhammad Talal Daahir.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Maleeshiyaadka Shabaab, waxaana arrintaan ay ku soo aadeysaa xili malin ka hor ay Dowladda Mareekaka Ciidamada AMISOM ugu deeqday inka badan 10 DIyaaradaha nooca wax basaasa ah.